“Fanesorana ny jadona no nitolomana ka tsy ekena izay mikatsaka hamerina izany” hoy Jean Navandahy Harison, Za’Gasy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Mpanatanteraka hampiarahana ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fitsapa-kevi-bahoaka hanitsiana ny Lalampanorenana amin’ny maha kandida ny tenako dia milaza mahitsy aho fa tsy mety izany” hoy Jean Navandahy Ratiharison.
Nambarany fa maro ny antony tsy mahamety an’izany fampiarahana fifidianana roa samy hafa izany.
Ny voalohany dia ambarany fa ny fikitihana ny Lalampanorenana dia zavatra saro-pady. Ekena fa nanao fampanantenana ny kandida Rajoelina izay lasa filoham-pirenena fa na izany aza mila fotoana ny fanazavana ny andininy n a andalana kitihana. Mila fotoana ny fanazavana an’izany ho tsapan’ny vahoaka ny fiantraikan’izany fanovana izany. “Ho ahy dia tokony ho niandry ny fijoroan’ny Antenimieram-pirenena vaovao ny fandrosoana izay fanitsiana tian-katao ka ireo depiote vaovao no nangalana ny heviny” hoy ity kandida tsy miankina ity. Notsiahivin’ity kandida ity fa ny filoham-pirenena teo aloha dia efa nieritreritra hitondra fanitsiana io Lalampanorenana io ary nangataka ny hevitry ny herivelona raha mahakasika ny tokony hifidianana ny filoham-pokontany ohatra.
“Fanomezan’ny Fanjakana tombony ho an’ireo kandidam-panjakana amin’izao fifidianana solom-bavam-bahoaka ny fampiarahana ireo fifidianana roa ireo satria ny Fanjakana mpanatanteraka dia tsy maintsy hanao fampielezankevitra hanazava ny fanitsiana tiany entina ary ny lafin’ny tsara no avoitrany” hoy ny filohan’ny Za’Gasy. Hevitra faharoa tsy mampety io fampiarahana ny fifidianana roa io izany araka ny fanazavan’i Jean Navandahy. Ny mpanatanteraka hanazava ny fanitsiana dia ampiasa ny fitaovam-panjakana amin’ny toerana iray dia mandalo andro iray aoriana ny kandidam-panjakana dia mipasoka ny efa malama izy. Ary azo inona tokoa fa alamin-dry zareo ny fandaharam-potoana mba aorian’ny fampielezan-kevitry ny kandida atahorana ny fandalovan’ny mpanazava ny fanitsiana ny Lalampanorenana karazany manitsaka na manao tsindry aloka ny mpifanandrina tsotra izao izany tetika izany. “Ohatra raisiko dia hanao tatitry ny asa vitany tao anatin’ny 100 andro ny filoha Rajoelina. Azo antoka fa hanatrika ao ireo kandida IRD. Efa fanomezana tombon-dahiny izany. Dia tahaka izany koa rehefa hanazava ny fanitsiana ny Lalampanorenana na ny minisitry ny Atitany na minisitry Fitsarana na ny mpanatanteraka hafa dia hanatrika ao ny kandida isaky ny fari-pifidianana hanaovana ilay fanazavana” hoy izy nanohy hatrany.
Ny antony fahatelo nambaran’ity kandida ity dia tsy fanajana ny hafa efa mandamina ny fomba fiasa. “Raha nanoman-tena hilatsaka ho solom-bavam-bahoaka ny tenako dia efa nanadihady sy nikajy izay tokony ho lany mandritra ny fampielezan-kevitra. Efa natonta mialoha tany amin’ny tranom-pirinty ny fitaovana ilaina amin’ny fampahafantarana ny kandida mandritra ny fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra izany, hafa indray koa ny fitaovana hampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsy tao anaty kajy ity resaka fanitsiana Lalampanorenana ity. Mazava loatra fa tsy azo roritina tahaka ny fingotra na elasitika ny tetibola vokany ho sahirana avokoa ireo kandida rehetra. Ny kandidam-panjakana irery no tsy sahirana satria ny azy ny fitaovan’ny fanjakana no ampiasainy” hoy Jean Navandahy. Araka izany tsy mitovy zo ny kandida ho solombavam-bahoaka.
Ho an’ity kandida mitarika ny lisitra “Indépendant Ratiharison Jean Navandahy” ity dia tena tokony tsy kitihana aloha ny Lalampanorenana mba hisorohana ny mety hisian’ny kirizy vaovao indray izay tsy mahasoa ny Firenena sy ny Vahoaka Malagasy. “Hiala amin’ny Jadona no nitolomana tamin’ny 2009 izao isika miroso mankany indray raha ny fomba fiasa. Fanesorana ny jadona no nitolomana ka ilaina sakanana izany” hoy ity olom-pirenena nandray anjara tamin’ny tolona 2009 ity.
Isan’ny manatevina ny tsy fankasitrahana ny fampiarahana ny referandaoma sy ny fifidianana ho depiote ity kandida ity. Tsy ny votoatiny no tsy ekeny fa ny fampiarahana ny fifidianana roa tsy mitovy lanja. Mamitaka ny safidiny mpifidy ny fampiarahana ireo fifidianana roa ireo. Tsiahivina fa efa maro ireo nijoro sy nilaza ny tsy fankasitrahany ny fampiarahana ny fifidianana roa samy manana ny lanjany ireo isan’izany ny KMF/CNOE.
Ho ren’ny Fanjakana ve izany tsy fankasitrahana izany ?
Finale ﻿CAN 2019 : Parcours et chiffres clés - il y a 51 minutes